August 11, 2021 - Babal Khabar
Aug112021 by EditorNo Comments
कोरियन भाषामा १ नम्मरले फेल bhaeko risale लोकसेवा पास गरेर बने बैंकका हाकिम !
लोक सेवा पास गरेर सरकारी जागिरे बन्नु सपना हो, कम्तिमा ती युवाहरुका लागि जो आफ्नो भविष्य आर्थिक, पारिवारिक तथा सामाजिक रुपमा सुरक्षित गर्न चाहन्छन् । लोकसेवा फारम भर्न जति सजिलो छ, यस्तो सहज छैन परीक्षामा पास हुन । कतिले यो वर्ष भएन, अर्को वर्ष । यता भएन उता गर्दै सरकारी जागिरका लागि फारमको लाइन बस्छन् । अनि परीक्षाको तयारी, र पनि सफलता नजिक देखिँदैन । तर रामबहादुर खत्री (२५) लाई यो सफलता हासिल गर्न जम्मा पाँच महिना लाग्यो । उनी अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कार्यरत छन् । यो सफलता चुम्न उनले त्यो पाँच महिना कुन तहको कठिन मेहनत गरे भन्ने कुरा बुझ्न उनको दुई शब्द नै काफी छ । त्यो हो ‘कुर्चीमै निदाउथे’ । यसबारे तल चर्चा गरिनेछ। कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ३ कुचैनीमा राम खत्रीको घर छ । बुवा शिक्षक थिए । बीचमै जागिर छुट्यो । प्लस टू को पढाई सकेका खत्रीको त्यसपछि बिसिए (ब्याच
याद गर्नुभएको छ, औषधिको पछाडि हुने रातो धर्काको अर्थ के हो ! यस्तो हुन्छ अर्थ नछुटाई हेर्नुहोस् ।
एजेन्सी । हामीलाई थाहा छ कि डाक्टरको सल्लाह बिना औषधि खानु हुँदैन । तर सामान्यतय टाउको दुखेदेखि झाडावान्ता हुँदा भने कुन औषधि खाने भन्ने धेरैलाई ‘कन्ठ’ जस्तै भइसकेको हुन्छ र यस्तो भएमा हामी आँफै पनि औषधि खाने गरेका छौं । यो कुरा पनि थाहा नहुनेहरूका लागि भने विज्ञ ‘मेडिकल सञ्चालक’ हुन् । हामीमध्ये कतिपयले याद गरेका हुँदैनौं कि कुनै औषधिमा विशेष संकेत पनि हुन्छ भनेर । तपाईंले एकप्रति ट्याब्लेट औषधिको पछाडि हेर्नुभयो भने अधिकांशमा रातो धर्का देख्न सक्नुहुन्छ, दुखाइ कम गर्ने कडा औषधि र एन्टिबायोटिक्समा विशेषगरी यस्तो संकेत कोरिएको हुन्छ । यिनको खोलमा पनि यस्तो धर्सा हुन्छ ।यसरी औषधीमा कोरिएको रातो धर्काको हो – डाक्टरको सुझाव वा प्रेसक्रिप्सनबिना खान नहुने । हालै भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि यसबारे जानकारी दिँदै जथाभावी औषधि नखान सुझाएको छ । मन्त्रालयको ट्विटरमा ‘रातो धर्का भएका
नि’यमित यौ’न स’म्पर्क गर्ने महिला कसरी चिनिन्छन्..
निमयित यौ’न स’म्बन्ध राख्ने महिला वा पुरुषलाई किटान गर्न गाह्रो छ । तर, महिलाको भने केही शा’रीरिक रुपमा परिवर्तन आउने दाबी गरिएको छ । पुरुषको तुलनामा केही महिलाको शा’रीरिक रुपमा परिवर्तन आउने गर्छ । यसलाई यौ’न स’म्बन्धको कारण मात्रै नलिई अन्य मा’नसिक लगायत कारण मानिन्छ । तर, एक अ’ध्ययनले भने नियमित यौ’न स’म्बन्ध राख्ने महिलाको सजिलै पहिचान गर्न सकिने दाबी गरेको छ। सर्वे युनिभर्सिटी अफ लिड्सका सोधकर्ताले गरेको एक अध्ययनअनुसार नियमित यौ’न स’म्बन्ध राख्ने महिलाको शा’रीरिक बनावट केही मात्रामा परिवर्तन भए पनि एक दिनमा नै धेरै पटक यौ’न स’म्पर्क गर्ने महिलाहरुको नि’तम्ब अर्थात हिप फुलेर ठूलो हुने गर्छ । अनु’सन्धानको क्रममा महिलाहरुको हिपको सबै भन्दा ठूलो भाग र कमरको सबै भन्दा पातलो भागको नाप लिइएको बताइएको छ । अनु’सन्धानका क्रममा जुन महिलाले एक दिनमै धेरै पटक यौ’न स’म्बन्ध राखे उनीहरुको हिप
मन मिले के हुदैन सबै हुन्छ, कोही हुनुहुन्छ ? मसग मन मिल्ने भन्दाइ यस्तो भनिन् ( भिडियो सहित )
सामाजिक संजालमा बिभिन्न रोमान्सका कुरा गरेर चर्चामा आएर चर्चित बनेकी गायिका हुन सबिना सबु । उनले केही समय अगाडी मात्र एउटा गित बजारमा सार्बजनिक गरेकी पनि थिईन । गित पनि गाउने, रोमान्सका र यौनका बारेमा रमाईलो कुरा गर्ने सबिना सबु मोडल पनि हुन । उनले आफुलाई हट केक भनेर पनि चिनाउछिन । उनले सामाजिक सञ्जाल यु ट्युवमा धेरै अन्र्तबार्ता दिईकी छिन । उनलाई प्राय यु ट्युवरहरुले अलिक छाडा खालको प्रश्नहरु गरेका छन । उनले पनि यु ट््युवरहरुले सोधेको प्रश्नहरुको खुलेर जवाफ दिईएकी छिन । उनी सँग गरेको कुराकानी यु ट्युवमा धेरै जनाले हेरेका छन अनि बिभिन्न प्रतिकृयाहरु पनि जनाईरहेका छन । सबिना सबु लेखेर यु ट्युवमा खोज्नु भयो भने उनले यु ट्युवमा दिएका धेरै कुराकानीहरु हेर्न सक्नु हुन्छ । यो पनि पढ्नुहोस टिप्स महिलाहरूले आफूलाई आकर्षक राम्री देखाउन लिपस्टिक प्रयोग गर्छन् । लिपस्टिक लगाउनु सामान्य विषय मान
हामी घरमा अथवा कोठामा एक्लै भयौं भने के गर्छौं रु टिभी हेर्छौं, पार्टी गर्छौं अथवा मोजमस्तीका अन्य केही विकल्पहरु । तर केटीहरु घरमा एक्लै हुँदा के गर्छन् होला ? एक्लै भएको मौकामा उनीहरु परिवारका सामु हेर्न असहज हुने टिभी शोहरु हेर्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । यस्ता छन् केही केटीका बारे रोचक तथ्यहरु जब घरका सदस्यहरु बाहिर जान्छन् या एक्लै हुन्छन् उनीहरु आफूलाई मिनी फेशनका रुपमा लिन्छन् । आफूले पछिल्लो समय किनेका नयाँ–नयाँ कपडाहरु लगाउँछन् । त्यो उनीहरुको परीक्षण हो । एक्लै भएको मौकामा उनीहरु परिवारका सामु हेर्न असहज हुने टिभी शोहरु हेर्ने गर्छन् । एक्लो अवस्थामा केटीहरु ऐनाको अगाडि उभिएर आफ्नो अनुहारलाई विभिन्न रुपमा प्रस्तुत गर्छन् । कहिले मुख बिगार्छन् त कहिले हाँस्छन् । यस्तो गर्दा उनीहरु आनन्द महशुस गर्छन् । आफूलाई मनपर्ने गीत ठूलो आवाजमा सुन्छन् र गाउने पनि गर्छन् । बहाना बना
यस कारण म फेसबुकमा परपुरुषहरु सँग जिस्किने गर्छु! कोही छ भने आउनुहोस् र पुरा पढ्नुहोस्…
पहिलो पटक जब फेसबुकमा उसको म्यासेज आयो म झस्किएँ । मुटुको गति थामिए जस्तै भयो । श्रीमान घरमा हुनुन्थेनन् । फेरी पनि मैले कुनै गलत गर्दैछु झैं लाग्यो । अनलाईनमा आएको एउटा म्यासेजलाई हेर्न पनि मैले यता उता हेरेँ, कसैले देखेको पो छ कि ? आफैमाथि हाँसे अनि सोचे घरमा कोही पनि छैन् त कोसँग डराएको होला । उसले म्यासेजमा ‘हाय म तीमीसँग मित्रता गाँस्न चाहन्छु’ भनेर लेखेको थियो । म्यासेज पढेर मुहारमा मन्द मुस्कान आयो । तर, आफैलाई होईन जस्तो गरी सम्माहले ।_ एउटा नचिनेको मान्छेको अनलाईनमा म्यासेज आउँदा मैले चाँसो किन राख्नेँ ? श्रीमानको कुरा मनमा आउने बित्तिकै मनमा कस्तो घोँचे जस्तै भयो । त्यो उनको चिसोपना हो कि कुनै नचिनेको मान्छेले लेखेको ‘हाय’ले पनि मेरो मनमा काउकुती लगाई रहेको थियो । शायद मैले उसलाई कुनै प्रतिउत्तर नदिन पनि सक्थेँ तर उनी प्रति ममा यति धेरै रिस उठी रहेको थियो कि मैले पनि ‘हा
अर्कोतिर औंला नठड्याऔं, सबैले सबैलाई देखेकै छ : सांसद कोमल वली
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)की सांसद कोमल वलीले देशका ठूला भ्रष्टाचार काण्डको निष्पक्ष छानविन गर्न सरकारसंग माग गर्नुभएको छ । बुधबारको राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद वलीले वाइडबडी, अरुण तेस्रो, टनकपुर, बालुवाटार प्रकरण, ओम्नी प्रकरण, आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण लगायतको भ्रष्टाचार छानविन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद वलीले देशमा भ्रष्टाचारका कुरा धेरै भएको बताउनुभयो । उहाँले भाषण, भोट माग्ने माध्यम मात्र बनाउन नहुनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,’अरुको पार्टी फुटाएको के को लागि हो? अर्कोतिर औंला नठड्याऔं। सबैले सबैलाई देखेकै छ ।’ सांसद वलीले कतिपय जलविद्युत आयोजना विदेशीको इशारामा सम्झौता भएका र अरबौं भ्रष्टाचार भएको भनाई पनि राख्नुभयो ।
(फाइल तस्बिर )काठमान्डाैं / कोरोना महामारीलाई देखाएर विभिन्न मुलुकले लागु गरेको आआफ्नै नियमका कारण नेपाली युवाले वैदेशिक रोजगारीमा जान समस्या खेप्दै आएका छन्। पछिल्लो समय संयुक्त अरब इमिरेटस् ९युएई० ले लागु गरेको नयाँ नियमका कारण सोमबार डेढ सय यात्रु दुबई जानबाट रोकिए। युएई सरकारले जहाजको बोर्डिड पास लिनुभन्दा अघि विमानस्थलमा नै एन्टिजेन परीक्षण गरेकालाई मात्र आफ्नो मुलुकमा आउन दिने नियम लागु गरेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एन्टिजेन परीक्षणको सुविधा नभएकाले दुबई जान लागेका डेढ सय यात्रु रोकिएका हुन्। यी यात्रुमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा धेरै रोजगारीका लागि दुबई जाने युवा थिए। नेपाल वायुसेवा निगमको आरए २२९ र हिमालय एयरलाइन्सको एचएन ५६५ उडानमार्फत दुबई उड्न विमानस्थल पुगेका यात्रु सोमबार त्यसै फर्किए। विमानस्थलका अधिकारीहरूका अनुसार एयर ट्रान्सपोर्ट अपरेसन दुब